Mawjadaha kuleylka bisha Sebtember, waa dhacdo aan caadi ahayn | Saadaasha Shabakadda
Waxaan Spain kala kulmeynaa kuleyl aan caadi aheyn. Maalmihii la soo dhaafay, heer kulka ugu sareeya illaa iyo xagaagan ayaa la diiwaangaliyay, xilli xilli, ka fog dhamaadka, u muuqdo inuu dib u dhacayo 45,4ºC gudaha Las Cabezas de San Juan (Seville), 42,9ºC gudaha Xàtiva (Valencia), 39ºC gudaha Ses Salines, Mallorca (Jasiiradaha Balearic),… Oo sidaas, ilaa 38 gobol oo xagaaga ugu dambeeya ku bixinaya, ugu yaraan, gubanaya.
Hadda, runti ma waa hirar kuleyl ah?
Sida laga soo xigtay khubaro ka socota Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka, AEMET, hirarka kulaylku waa inuu soconayaa ugu yaraan saddex maalmood oo isku xigta waana in laga ogaadaa in ka badan 10% magaalooyinka, taas oo marinka digniinta loo baahan yahay oranji, waxbaa dhacaya: wadar ahaan 38 gobol ayaa heegan ugu jira kuleylka, oo leh heerkul u dhexeeya 34 iyo 43ºC.
Marka, inyar oo kayarba waxay noqoneysaa dhacdo aan caadi aheyn, kaliya maahan taariikha aan kujirno, laakiin sidoo kale iyo waliba waxkastoo kahoreya qiimayaasha ladiwaangelinayo. Sida Modesto Sánchez Barriga, afhayeenka AEMET uu sharaxay, qiyamka xad dhaafka ah ayaa la duubay, sida 39ºC garoonka diyaaradaha Santiago de Compostela, ee 42,3ºC gudaha Cáceres ama 39,8ºC Albacete.
Waa maxay ifafaalahaasi? Weli lama ogaan karo hubaal, laakiin khubarada ayaa rumeysan inay dhici karto maxaa yeelay dhacdadii El Niño way dhammaatay. Markay dhacdo, xaaladda jawiga si weyn ayaa loo beddelaa, sidaas darteed tamar ayaa la soo daayaa taas oo sababta in hawadu bedesho wareegeeda, sida uu sharraxay Belén Rodríguez de Fonseca, oo ka socda Waaxda Juquraafiga iyo Saadaasha Hawada ee Jaamacadda Complutense ee Madrid.
Marka El Niño dhammaado oo La Niña yimaado, hirarka kuleylka iyo abaaraha badanaa waxay ka dhacaan Yurub. Laakiin, sidaan soo sheegnay, weli waa xilli hore in gabagabo la gaaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Mawjadaha kuleylka bisha Sebtember, waa dhacdo aan caadi ahayn
Fungi waxay sababi doontaa cuduro faafa oo ay sabab u tahay kuleylka adduunka